IBlu Peter Penthouse - I-Airbnb
IBlu Peter Penthouse
North Coogee, Western Australia, i-Australia
Olunye uhlobo! Ifulethi elilodwa le-penthouse enekamelo elinokubukwa kwe-panoramic ocean.
Isitayela sika-Blu Peter Homestore, leli fulethi lihlotshiswe kahle futhi lilungele ukubaleka kwezithandani noma kulowo mcimbi okhethekile.Unokufinyelela okuyimfihlo okugcwele emphemeni wakho nge-Bbq, indawo yokuphumula, i-hammock kanye ne-spa enkulu yangasese.
Ngakho-ke hlala emuva, phakamisa izinyawo zakho futhi uphumule ngenkathi ubuka izikebhe zidlula.
Igumbi elilodwa lokulala efulethini elilodwa le-studio elinekhishi, Ukufinyelela ngekheshi kuya esitezi esiphezulu.
Ifulethi lase-Oceana lisendaweni yokugibela ibhayisikili elifushane ukusuka ethekwini elihle laseFremantle eWestern Australia eliyingxenye yedolobha lasePerth.Yaziwa ngomlando wayo wasolwandle, ukwakheka kweVictorian kanye nezinsalela zezinsuku zase-Australia njengekoloni lokujeziswa laseBrithani.Ijele iFremantle, ebelihlalisa iziboshwa kusukela ngeminyaka yawo-1850 kuya ku-1991, manje selinama-cellblocks akhiwe kabusha. I-Round House enezinhlangothi ezingu-12, isakhiwo esiyingqopha-mlando sango-1831, nayo yasebenza kafushane njengejele.
Ngokumelene nokwasemuva kwe-port streetscape yechweba yekhulunyaka le-19 egcinwe kahle kakhulu emhlabeni, usuku lokuphuma eFremantle luyinhlanganisela engavamile kanye ne-eccentric yokudla okumnandi kwezandla, ubhiya owenziwe ngezandla, ikhofi elimnandi, izindawo zokuthenga ezingavamile kanye nomculo ojabulisayo, ubuciko nesigcawu sefestiveli.
Eduze kwaleli fulethi kungenye yamabhishi okusefa ama-kite ahamba phambili endaweni yasePerth, futhi isemngceleni weSouth Beach Fremantle, ulwandle oluthandwa kakhulu ngabantu bendawo.ISouth Beach Sunset Market iyimakethe yokudla edumile esebenza njalo ngoMgqibelo kusukela ngomhlaka-1 kuZibandlela kuze kube uMashi kusukela ngo-6-9pm.
Eningizimu yethu kune-Coogee Maritime Trail futhi ihlanganisa kokubili imisebenzi yangaphansi kwamanzi kanye neyezwe.Umzila ugxile e-Omeo, umkhumbi omkhulu wasePerth ozinze ogwini. I-dive ne-snorkel trail ihlanganisa izixhobo ezingaphansi kwamanzi nemisebenzi yobuciko, okungeyokuqala yohlobo lwayo e-WA.
Sinompheki womuntu siqu ongapheka futhi akhonze isidlo sakusihlwa sothando efulethini ngokwesicelo sakho.Uma ungaba nentshisekelo ungazise futhi ngizokuthumelela imininingwane yakhe ukuze uthole izinketho zemenyu namanani. Udinga okungenani isaziso sosuku olulodwa.
Sinompheki womuntu siqu ongapheka futhi akhonze isidlo sakusihlwa sothando efulethini ngokwesicelo sakho.Uma ungaba nentshisekelo ungazise futhi ngizokuthumelela imininingwane yakh…
Hlola ezinye izinketho ezise- North Coogee namaphethelo